Soo dejisan Sweet Home 3D 5.1 – Vessoft
Soo dejisan Sweet Home 3D
Sweet Home 3D – software ah in la odoroso design gudaha ee qiyaas 3D. Software waxuu si ay u abuuraan qorshe faahfaahsan oo guriga kula meesha uu daaqadaha, jaranjarada, albaabada, alaabta guriga ama shey kale. Sweet Home 3D ku jira buugga alaabta soocaa oo qaybo u leh awood in uu iska badalo size ee baahida user a a. Software wuxuu taageeraa la daawado ee gudaha loogu talagalay in hababka 2D iyo 3D. Sweet Home 3D kale oo aad ku soo bixi daydo dheeraad ah ee gudaha ka soo website-ka rasmiga ah.
Naqshado qorshe faahfaahsan oo guriga
Directory of walxaha in la odoroso
Meeshay oo ah tirada alaabta guriga
Gudaha Views in hababka 2D iyo 3D
Downloads waxyaabaha dheeraad ah
Sweet Home 3D Software la xiriira:
English, Français, Español, Deutsch... XnView 2.37 Standard, Extended iyo Minimal
العربية, English, Українська, Français... MODO 10.1v2
English, Español, 中文, 日本語... XAMPP 5.6.24
العربية, English, Українська, Français... Scilab 5.5.2